काम गर्ने महिला, दाम लिने पुरुष |
काम गर्ने महिला, दाम लिने पुरुष
प्रकाशित मिति :2016-12-21 11:10:33
बिक्री लागि खुर्सानी टिप्दै फुल कुमारी महतो
सिरहा । फुलकाकटीकी फुल कुमारी महतोको दिनचर्या एकाबिहान तीन बजेदेखि शुरु हुन्छ र राती १२ बजेमात्रै उनले छुट्टी पाउँछिन् । उनी व्यवसायिक किसान हुन् । तीन बिघा खेतमा लगाएको व्यवसायिक तरकारी खेतीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी फुल कुमारी कै छ । उनको परिवारले तरकारी खेतीबाटै बार्षिक आठ, दश लाख रुपैयाँको आम्दानी लिन्छ ।
तर फुल कुमारी काम गर्ने मजदुरमात्र हुन् । उनले उब्जाएको तरकारी कहिले बेच्ने ? कति मुल्यमा बेच्ने ? बेचेर आएको पैसा केमा खर्च गर्ने भन्ने उनको छोरा र श्रीमान्ले निर्णय गर्छन् । फुल कुमारी भन्छिन् ‘मेरै मिहिनेतले उब्जाएको तरकारी व्यवसायको कमाईले परिवारले बार्षिक आठ, दश लाख रुपैयाँ आम्दानी लिन्छ ,तर आफूलाई खर्च गर्ने दुई चार पैसा पनि श्रीमान्सँगै हात थाप्नु पर्छ ।’
तरकारी खेती, माछापालन, व्यवसाय , र फलफूल खेतीका लागि पुर्वान्चलकै पकेट क्षेत्र घोषित भएको गाविस हो सिरहाको फुलकहाकट्टी । यहाँका सबै महिला पुरुष व्यवसायीक किसान हुन् । तर, व्यवसायिक खेती महिलाका भरमा चलेको छ । महिलाकै योगदानले परिवारमा आर्थिक सम्पन्नता बढाएको पनि छ । फुलकुमारी महतोको पनि चार बिघा खेतीको जग्गा छ भने, गोलबजार, लहान, धनगढी बजारमा घर, घडेरी छ, त्यो सबै तरकारी खेतीकै कमाईले जोडेको हो । फुल कुमारी भन्छिन्, ‘तर त्यो जग्गा जमिन , धन सम्पत्ति मेरो होईन , सासु श्रीमान् र छोरा को हो, म त केवल सम्पन्न परिवार भित्रकी गरिब र विपन्न महिला हुँ ।’
छोरा, ससुरा र श्रीमान्ले नभ्याउँदा फुल कुमारी आफैले उत्पादन गरेको तराकरी बेच्न गएपनि घरमा आएर श्रीमान् र छोरालाई हिसाब बुझाउनु पर्ने बताउँछिन् । आधा रातमा उठेर खेतीपाती, गाईबस्तु, घरको काम भ्याएर बजार गयो, उल्टै महँगोमा बेचेर पैसा लुकाएर कम दाममा बेचें भनेको त होईन ? भनेर उल्टै हजार सवाल सुन्नु परेको उनले अनुभव सुनाइन् ।
त्यसैगरी फुलकहाकटीकै रिना महतोले स्नातक गरेकी छन् । उनको पनि व्यवसायिक तरकारी खेती छ । दुईजना बालबच्चाको रेखदेख गर्दै खेतीपाती, रिनाले नै सम्हाल्छिन् । खेती लगाउने, गोडमेल गर्ने, फलेको तरकारी टिप्ने पखाल्ने र बजार लैजान तयार पार्ने रिना नै हुन् । श्रीमतीले ठिक्क पारेको सामान श्रीमानले बजारसम्म पुर्‍याएपछि त्यसको आम्दानीको अधिपति श्रीमान नै हुन् ।
आफैले व्यवसाय गरेपनि आमदानी श्रीमानको पोल्टामा जान्छ । रिना भन्छिन् ,‘चुरा टिका लगाउने पैसा पनि श्रीमान्सँगै माग्नुपर्छ ।’ खेतबारीको काममात्र होईन, बालबच्चा समेत एकछिन श्रीमानले नसमाउने उनी गुनासो गर्छिन । रिना भन्छिन् , ‘आफू बिहानै उठेदेखि गाईबस्तुलाई घाँसपानी, भातभान्सा बालबच्चा, खेतबारीको कामले थाकेर आउँदा श्रीमान् भने चोकमा गफ चुटेर आउँछन् र उल्टै खाना पाकेन अहिलेसम्म भनेर गाली गर्छन् ।’
केही बोले साथ दिने कोही नभएकाले चुपचाप सहेर बस्न बाध्य भएको रिना बताउँछिन् ।
सिरहा वैदेसिक रोजगारीका लागि सबभन्दा धेरै जाने तराईका जिल्ला मध्येको एक हो । पुरुष र युवा सबै वैदेसिक रोगारीका लागि विदेशमा छन् । कृषि र पशुपालनमा महिलाको योगदान छ । व्यवसायिक किसानहरू समेत महिलाकै कामको भरोसामा आम्दानी गरिरहेका छन् । तरपनि महिलाहरू आर्थिक रुपमा भने परनिर्भर हुन बाध्य छन् ।
महिलाले व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गरि परिवारको लागिमात्र होइन राज्यकै लागि आर्थिक रुपमा ठूलो योगदान गरेको बताउँछिन् अधिकारकर्मी गीता शाह । तर, यहाँमहिला काम गर्ने मेसिनको रुपमामात्र प्रयोग भएको उनको ठहर छ । आर्थिक स्वामित्वमा महिलाको निर्णय हुनका लागि महिला शसक्त भएरमात्र सम्भव भएको र यसका लागि ग अभियान चलाएको उनी शाह बताउँछिन् ।
राजनीतिक दलका कार्यक्रम , अभियान र एजेन्डाहरूमा पनि महिलाका आर्थिक अधिकारका कुरा चुनावी नारामा मात्र सिमित देखिन्छन् । नकपा एमाले अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष राम अवतार यादव महिलाहरूका कृषि आर्थिक स्वामित्वमा पनि अधिकार स्थापित गर्न बृहत भेला सर्लाही जिल्लामा गरिसकेको र अब सिरहामा पनि गर्ने बताउछन् ।